ဥရောပ၌ရထားကြီးမားတဲ့အရာများမှာ; ငါတို့သည်ငါတို့၏သံလမ်းကိုချစ်, ကျနော်တို့သည့်အချိန်တွင်မဆိုသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးတခြားအမျိုးအစားကျော်သူတို့အားရှေးခယျြပါလိမ့်မယ်. အပြင်လျင်မြန်အတွက်အမှတ် A ကနေအမှတ် B ကိုမှရတဲ့အနေဖြင့်, အဆင်ပြေခြင်းနှင့်ယုံကြည်စိတ်ချရသောထုံးစံ, အများစုဤမျှလောက်ရှိမယ့်…
Flam အ Myrdal, နော်ဝေ: တစ်ဦးကလှပသောနွေရာသီ Stop
Flam ထံမှ Myrdal ဖို့ Flam မီးရထားလမ်းကမ္ဘာပေါ်မှာအလှဆုံးရထားခရီးတဦးဖြစ်ဖို့နဲ့ကျနော်တို့အဘယ်ကြောင့်နားလညျနိုငျဟု. အဆိုပါခရီးသာတစ်နာရီကြာပေမယ့်ရှုခင်းအမှန်တကယ်အသက်ရှု-ဆည်းပူးနေဖြစ်ပါတယ်. လာရောက်လည်ပတ်တဲ့အခါမှာဒီအတွေ့အကြုံကိုလက်လွတ်မနေပါနဲ့…
ရထားခရီးသွားခြင်း, ရထားခရီးသွားနော်ဝေး, ခရီးသွားလာရေးသိကောင်းစရာများရထား
သငျသညျစပိန်ဖြုန်းဖို့နှစ်ပတ်အတွင်းရှိပါက, လှည့်ပတ်ရဖို့အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းတွေထဲကတစ်ခုရထားအားဖြင့်စပိန်စူးစမ်းဖို့ဖြစ်ပါတယ်. မသာဤသူသည်သင်တို့တိုင်းပြည်တစ်ဝှမ်းအချို့မယုံနိုင်စရာမြင်ကွင်းများကိုမြင်ခွင့်ပြုပါလိမ့်မယ်, ဒါပေမယ့်စပိန်အတွက်မီးရထားခရီးသွားလာအလွန်ထိရောက်သောဖြစ်ပါသည်…
အသစ်ရထားလိုင်းကိုစတင်ပေးခဲ့ပါတယ်, အဇာဘိုင်ဂျန်ဖုံးအုပ်, ကြက်ဆင်, နှင့်ဂျော်ဂျီယာ. အဆိုပါလိုင်းကျော်ဖုံးလွှမ်း 820 ကီလိုမီတာနှင့်ခရီးသည်တင်ရထားအပြင်ကုန်တင်ပြီးရှိကြတယ်. ပထမဦးစွာ, မျဉ်းရုရှားကကျော်လွှားနေတုန်းဥရောပနှင့်တရုတ်ချိတ်ဆက်ဖို့ပထမဦးဆုံးဖွစျလိမျ့မညျ. The train will operate from…
စပိန်အတွက်စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းနှင့်တက်ကြွသောမီးရထားဘူတာရုံ၏နံပါတ်ရှိပါသည်. သင်တွေ့လိမ့်မည်အမြင့်ဆုံးအမြန်နှုန်း, အလတ်စားအကွာအဝေး, ဒေသဆိုင်ရာ, တိုင်းပြည်တစ်လျှောက်လုံးမြို့ပြနှင့်ဟိုတယ်-မီးရထားခရီးသွားလာ. ကြီးမားသောခေတ်သစ်ဘူတာကနေသဘာဝကဝိုင်းသေးငယ်သူတို့ကို, ဤအရာများသည် 10 စပိန်ရဲ့အများဆုံးစိတ်ဝင်စားဖွယ်ရထား၏…
ဥရောပတစ်ဝှမ်းခရီးသွားလာမှုအတွက်ရထားအကြံပေးချက်များခရီးသွားများအတွက်မရှိမဖြစ်များမှာ. ပထမဦးစွာ, ဥရောပခရီးအဘို့များစွာသောကွဲပြားခြားနားသောအကြောင်းပြချက်ရှိပါတယ်. သငျသညျအဆင်းလှတံတားများကြည့်ဖို့လိုပေမည်, မီးရထားဘူတာ, နှင့်အညီအမျှရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ရာရှုခင်း. သို့မဟုတ်ဖြစ်ကောင်းသင်အီတလီနိုင်ငံရဲ့အံ့သြဖွယ်ယဉ်ကျေးမှုကြည့်ဖို့ခရီးသွားလာနေသော. အပေါ်…
ဘူဒါပက်ခုနှစ်တွင်ရထားဖြင့်ခရီးသွား: 10 သင်သိပါရန်လိုအပ်သောအရာတို့ကို
ဘူဒါပက်ဆက်ဆက်ဟန်ဂေရီ၏အချက်အချာဖြစ်ပါသည်. ကဘူဒါပက်အတွက်ရထားဖြင့်ခရီးသွားခြင်းမှကြွလာသောအခါ၎င်းသည်အများအပြားရထားရှိပါတယ်ဗဟိုအချက် Stop င်. ဘူဒါပက်နှင့်ယေဘုယျအားဖြင့်ရထားများကခရီးသွားစိတ်လှုပ်ရှားစရာနှင့်မကြာခဏများစွာသောလူအဘို့အသစ်တစ်ခုအတွေ့အကြုံနေစဉ်,…
ရထားခရီးသွားဟန်ဂေရီ, ခရီးသွားလာရေးသိကောင်းစရာများရထား, ဥရောပခရီးသွား
သငျသညျမဟုတ်ဘဲတစ်ဦးလေယာဉ်ပျံထက်ရထားလမ်းခရီးသွားစိတ်လှုပ်ရှား၏ပျော်ရွှင်မှုလက်ခံလို့ရထားလက်လှမ်းမှီဥရောပတိုက်တွင်သောအရပ်တို့ကိုရှာဖွေနေကြသူထွက်ရှိလူအပေါင်းတို့သည်စိတ်အားထက်သန်ခရီးသွားများအတွက်, ဤနေရာတွင်သင်ကိုချစ်မယ်ကြီးမြတ်တဲ့သတင်းတစ်ဖဲ့ကိုရခြင်းရဲ့. ဥရောပရထားခရီးစဉ်များနေ့စဉ်စီး…
ပထမဦးဆုံးအနနေဲ့, အထိအခမဲ့ရထားရှိလိမ့်မည် 30,000 ဆယ်ကျော်သက်ဒီနွေရာသီမှာ. အခမဲ့လက်မှတ်တွေအရေအတွက်ပင်ဝယ်လိုအားပေါ် မူတည်. တိုးမြှင့်စေခြင်းငှါ. အီးယူဒါ့အပြင်ကြောင့်အသက်ဆယ်ကျော်သက်ဖို့ကမျးလှမျးခကျြမရရှိနိုင်စေမည်ဖြစ်ကြောင်းကြေညာခဲ့သည် 18 နှင့်အငယ်. ကြောင့်…
ရထားဆယ်ကျော်သက်, ဗြိတိန်နိုင်ငံခရီးသွားရထား, ပြင်သစ်ခရီးသွားရထား, ရထားခရီးသွားဂျာမနီ, ခရီးသွားလာရေးသိကောင်းစရာများရထား, ဥရောပခရီးသွား
ထိပ်တန်း 10 နေရာတိုင်းမှာရထားမြင်းစီးစမတ်သည်လွယ်ကူသောသိကောင်းစရာများ
မီးရထားနဲ့ခရီးသွားကြန်းကျင်အရအများဆုံးဖြေလျော့ပေးခြင်း, ပျော်စရာနည်းလမ်းတွေထဲကတစ်ခုဖြစ်နိုင်ပါသည်. သင်သည်သင်၏ခရီးထဲကအကောင်းဆုံးဖြစ်စေစမတ်ဖြစ်ဖို့ဘယ်လိုသိရန်လိုအပ်. ကောင်းစွာစနစ်တကျဖြစ်ခြင်းများနှင့်အောင်ကိုဦးတည်နေတဲ့ရှည်လျားသောလမ်းဝင်ဘာမှုအရာကိုမသိဘဲ…
ရထားဘဏ္ဍာရေး, ရထားခရီးသွားခြင်း, ရထား Travel အီတလီ, ခရီးသွားလာရေးသိကောင်းစရာများရထား